Ivory Coast and Ghana livid at two chocolate multinational corporations
Kulanka xamaasadda badan ee El Clasico, waxa muddooyinkii u dambeeyey uu isku beddelay xafiiltan u dhexeeyey laba ciyaartoy oo ahaa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. Labadan laacib, ayaa sannadihii ay iska soo horjeedeen waxay kulankan weyn ka dhaliyeen goolashii ugu badnaa abid.
Arsenal Oo Xasuuq Geysatay Xilli Taageerayaasha Ay Ku Soo
Saadaasha Michael Owen Ee Kulamada Premier League Ee
Lionel Messi ayaa ah laacibka ugu goolasha badan taariikhda kulanka Clasico, waxaana uu Real Madrid ka dhaliyey 26 gool 41 ciyaarood oo uu ka hor tegay Los Blancos, kuwaas oo 19 ka mid ah uu kooxdiisa Barcelona guusha ku hoggaamiyey, 11 ay barbarro galeen 13-ka kalena ay Real Madrid badisay.
Waxa kusoo xiga oo ah ciyaartoyga labaad ee goolasha ugu badan ka dhaliyey Clasico, laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo muddadii uu joogay Real Madrid oo sagaal sannadood ahayd 18 jeer soo taabtay shabaqa Barcelona, waxaanay kaalinta labaad ee ciyaartoyga ugu goolasha badan Clasico ku wada jiraan halyeygii Alfredo Di Stefano.
Raul Gonzales ayaa kaalinta afraad kaga jira liiska ciyaartoyda goolasha ugu badan ka dhaliyey Clasico, waxaana uu shabaqa Barcelona soo taabtay 15 mar, halka Cesar Rodriguez, Ferenc Puskas iyo Paco Gento ay kaalinta shanaad ku wada jiraan oo mid walba uu 14 gool ka dhaliyey ciyaarta El Clasico.
Saddexda ciyaartoy Real Madrid usoo wada ciyaaray ee Santillana oo 12 gool dhaliyey, Hugo Sanchez oo 10 gool dhaliyey iyo Juanito oo siddeed gool dhaliyey ayaa iyaguna safka hore kaga jira liiskan, halka uu Luis Suarez 11 gool isaguna dhaliyey.
Halyey Reer Brazil Ee Pele Oo 80 Jirsaday Iyo Magacyada
Tensions are rising in Guinea earlier than the ultimate election outcomes
Ivory Coast and Ghana livid at two chocolate multinational…
Arsenal Oo Xasuuq Geysatay Xilli Taageerayaasha Ay Ku…
Ivory Coast and Ghana livid at two…